rocker - MYSTERY ZILLION
MYSTERY ZILLION 4th ANNIVERSARY	anniversary ကိုဘယ်မှာ လုပ်မှာ ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ တက်ရောက်ဖို့ ဘာတွေလို အပ်လဲ ဆိုတာကို ပေ့ါ။ ကျွန်တော့်gmail ကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်
အဆင်ပြေမယ် ဆိုရင် ကူညီကြပါဗျာ နော့်။
ပြန်တော့ ဖြေပေးကြပါနော့်	ကျေးဇူးပါဗျာ ပြောပေးရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်း ဘယ်သင်တန်းကို စတက်ရင် ကောင်းမ လဲ ဆိုတာ ညွှန်းပေးပါဗျာ နော့်။ ပိုက်ပိုက် ကတော့ သဌေးမဟုတ်တော့ မတက်နိုင်ဘူးဗျ ကူညီကြပါနော့်
ကျွန်တော် outlook မေးကို password လုပ်ချင်လို့ပါ	အကို ဒါက outlook express7ကို password ခံတာလား
ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်
virtual memory ဆိုတာဘာပါလဲဗျ။	virtual memoryပေးထားတဲ့ harddisk နေရာကို data တွေထပ်ထည့်လို့ရပါသလား။
သူဘာသာသူ လျှော့သွားတာလား။။အနော် တို့က လျှော့ပေးရမှာလား ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးကြပါနော်။
Proxy problem	အနော် တွေ့ထားတာရှိတယ် ၂၁၂.၉၃.၁၉၃.၈၈ ပေါ့ က ၄၄၃
:pသိတာလေးပြောတာပါ သိပြီးသားဆိုရင်လည်း နောက်နဲ့ နော်။:p
virtual memory ဆိုတာဘာပါလဲဗျ။	512MB RAM အတွက်ဆိုရင် initial size = 768 and maximum size=1536 ထားလိုက်ပါ။ ဒါက recommended value ပေါ့ အဲ့လို recommended value ကို ဘယ်ကနေရှာရမှာလဲဗျ။ ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ ပြောပြပေးပါနော်။ hard disk ပျက်နိုင်လားအကို။
W32.Almanahe.B Virus	အကို ရေ ကျွန်တော် တို့ က ၅၀၀တန်နဲ့ သုံးနေတာဗျ။ norton မသုံးဘူး။ အခြား portable ဆော့၀ဲ လေးတွေ များရှိလားလို့ပါ။ ကူညီပါဗျာ နော်။:2:
windwos7တင်ချင်လို ့ပါ	အကို ကမြန်မာနှိင်ငံက ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ် ၅၀၀ ရှိရင်ရတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ SD RAm နဲ့ ဆိုရင် window တင်လို့ရတယ် creak ဖြေလို့မရဘူးဗျ ကျွန်တော် ဖြစ်ဖူးတာ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးဗျ
ပြောပြပေးကြပါနော်။ လိုင်စင်နဲ့ သုံးရတာ ဘယ်လိုကွာလဲဆို တာ ပြောပြပါဦးနော်။USB ကနေ…
ကူညီကြပါနော်	အကို အဲ့ ဒီ password ကဘာလုပ်ကတာလဲဗျ။ ကျွန်တော် မသိလို့ပါနော်။
Return Of Winodws Registry	:106:အကို တို့ ဒီလိုမျိုး စာအုပ်မျိုး အပြင်မှာ ရောင်းတာရှိလားဗျ။နာမည်လေးပြောပြကြပါနော်။ မရှိရင် ဒါကို print မလို့ပါ ကလိတော့မယ်လေ....ကျေးဇူးပါဗျာ:6:
ဆောဒီ proxy ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ	အနော့် ကိုလည်းရခဲ့ ရင်ပြောပါနော် .. အလူရှင်လေးဘာလေးမရှိကြဘူးလားVPS လေးဘာလေနော့်။youtube ကိုဘာနဲ့ ခွရမလဲ ပြောကြပါဦးနော်။မျော်နေတယ်နော့်:P
avira primium 92 day keys	ကျေးဇူးဗျာ
မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရုံနဲ့ Virus ရှိတယ်ဆိုတာသ&#414	ကျွတော် လည်းရဘူးဗျ အကိုရ.တချို့antivirus တွေက autorun ဆိုကစ်တယ်။ အကိုကိုတော့ ကျေးဇူးပါဗျာ။နောက်လည်းရှာ၊ပြီးရေးပေးဦးနော်
Usb ကြိုးပြဿနာပါ	ဟုတ်လောက်တယ်ဗျ။ device mg:ထဲ ကို၀င်ကြည့်ပါလား။driver ကို uninstall လုပ်ပြီး။ပြန်တင်ကြည့်လေ။driver ကြောင်တက်တယ်ဗျ။
ကုူညီကြပါဦး..အဒေါင်းတက်ကော့လို့	ကျေးဇူးပါဗျာ...ဒေါင်းလို့တော့ရပြီ လုပ်လိုရမရသာ ကျန်တော့တယ်....ကျေးဇူးပါ..နောက်လည်းအားပေးပါဦးနော့:6:
ကုူညီကြပါဦး..အဒေါင်းတက်ကော့လို့	ရဘူးဗျ...ကျွန်တော့် window က ဂျပန် window ဖြစ်နေတယ်.. အကိုတို့ ပြောသလို ထဲမှာ english to japan မပါဘူး...အကုန်ဂျပန် ဖြစ်နေတယ်....ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ..:77:...
Funny ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ virus	ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော် လည်းခံရဘူးတယ် ..tesk mg.ကနေ END Process လုပ်လို့ရဘူး..
အွန်လိုင်းပေါ်တက်ကြည့်တော့.. mcafee က top list တွေ့တယ် mcafee 8.7နဲ့စမ်းကြည့်ပါလားနော့...ကျွန်တော် တုန်းကတော့ ပြတင်းပေါက် အသစ် လဲလိုက်တယ် ..မခံစားနိုင်တော့လို့...mcafee 8.…
ကူညီပါနော်...language change တာပ…
Mz လူကြီးများ ကယ်ပါ......	ကျေူဇုူးပါပဲဗျာ.....:6:
Google Chrome	ခုတော့ ဒေါင်းနေတယ်...ဆော့၀ဲ က နောက်မှဒေါင်းတယ် ကွန်က အရင်ဒေါင်းဒေါင်းသွားလို့ ခက်နေတယ်:Pမြန်မာနိုင်ငံမှန်း မမေ့အောင့်တဲ့ဟီဟီ:Pဂူဂဲ က Google Chrome 2.0.172.43 အဲဒါလား
ဒေါင်းသေးဘူး နော် ပြောဦးဟုတ်လားလို့နော့်\_:D/မှားတွားမှာ ဆိုးလို့
လူလုပ်သလို ကွန်ပျူတာကို ခိုင်းချင်လို&#4	ဘာတုန်းဗျ လူလုပ်ရင်လူဖြစ်တာ ခက်တာပဲ :65: အနော် တစ်ခုမေးမလို ပါ...:106:
ရှုပ်တာဟုတ်ဘူးနော်..ဒီမှာ လူဆုံနေလို့:)) အကိုအောက်က ဓာတ်လိုက်သလို လို မိုးရွာသလို လို ကို
ဘယ်က ဘယ်လို လုပ်တာလဲ:106:ပေးလို့ရရင် အနော့် ကို လဲ တစ်ခု လောက်ပေးပါလား\_:d/
ပြုတ်ပြုတ်ကျနေလို ့	ဖရီ ကြိတ်ရင်တော့ နဲနဲ ခက်မယ် ကွန်ကလေ.....အကြံပေးချင်တာကတော့..router နဲ့ နီးရင်တော့ အိမ်ကနေ network ကြိုး ယူသွားလိုက်ဗျာ ..ကွန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်..:103:နော့်:67:
proxyfire လေးဘာလေး ကွန် ကို ဆွဲတဲ့ ဆော့၀ဲလေးဘာလေးနဲ့ သ…
Memmory Stick Format ချလို့မရလို့	ဟဲဟဲ တစ်ချောင်းရသွားတာပေါ့ ဟုတ်စ။ကောင်းပ ဗျာ။ဒါနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့ရလဲ ဆို တာ ပြောပါဦး။တစ်ချောင်းလောက်ကလိမလို့ နော့်။
ကူညီကြပါဗျာ..အရေးကြီးနေပါတယ်	moe zatt ko said:avg update လုပ်တာ.. Install လုပ်တာဘာများခက်ခဲလို့လဲ.. တစ်ခြားဟာတွေကို လုပ်တာနဲ့ သိပ်မထူးပါဘူး.. Online update နဲ့ offline update လည်းလုပ်တတ်ပါလိမ့်မယ်..online update လုပ်ချင်ရင် .. Tool menu ထဲကနေ .. Update ကို click လုပ်လိုက်ရင် ..…
ကူညီကြပါဗျာ..အရေးကြီးနေပါတယ်	အကိုတို့ပြောသလို လုပ်ထားပါတယ်..ဒါပေမဲ့ဘာလို ကိုစက်ကို IP ping လို့မရတာလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါလား..ကျွန်တော်ထင်တာ network ကြောင့်လား..ဒါမှမဟုတ် ကြိုးကြောင့်လား..antivirus ကတော့ ထင်တယ် ဖြုတ်ကြည့်ဦးမယ် norton တင်ထားတာ..ဘယ်သူတင်သွားလဲမသိဘူး..ကျွန်တော် သုံးတက်…
windows တင်လို့မရလို့	စမ်းကြည့်ပါဦး။memory မကောင်းရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေ။harddisk ကကော အသစ်လား။memory stick က တင်တာကို တော့ itmen.blogspot.com မှာတွေတယ် သွားကြည့်ကြည့် လေ နော်။ သိသလောက် လျှာရှည်ကြည့်တာပါ။မှားရင် ခွင့်လွှတ်နော့်။
office ပြသာနာ လေး..ကူကြပါဗျာ..	ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ၀ိုင်းပြီးအားပေးလိုက်ကြလို့
ဘန်းကျော်ဆို်ဒ်လေးတစ်ခု	ကျွန်တော်လဲ Member ဖြစ်ချင်သည် ။ တစ်ခုလောက် Invite လုပ်ပေးပါ။ email က [email protected] ပါ။ plz.
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ယခု ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပါသလား? ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး မေးမြန်းလိုပါလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button များမှတဆင့် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်သကဲ့သို့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်အနေဖြင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ရောက်ရန် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်း အချက်အလက်
52 Powered by Vanilla